Bible Mu Nsɛm Efi Misraim Ogye So Besi Israel Hene a Odi Kan So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Mose dii Israelfo no anim fii Misraim nkoasom mu beduu Bepɔw Sinai ho, faako a Onyankopɔn de ne mmara maa wɔn. Akyiri yi Mose somaa mmarima 12 sɛ wɔnkɔhwɛ Kanaan asase no. Nanso wɔn mu 10 de amanneɛbɔ bɔne bae. Wɔyɛ maa nkurɔfo no pɛe sɛ wɔsan kɔ Misraim. Esiane gyidi a wonni nti, Onyankopɔn twee Israelfo no aso ma wɔnantenantew sare no so mfe 40.
Akyiri yi wɔpaw Yosua ma odii Israelfo anim kɔɔ Kanaan asase no so. Sɛnea ɛbɛyɛ na aboa ma wɔn nsa aka asase no, Yehowa yɛɛ anwonwade ahorow bi. Ɔmaa Yordan Asubɔnten mu twae, Yeriko fasu bu gui, owia gyinaa faako da mũ nyinaa. Mfe nsia akyi no wogyee asase no fii Kanaanfo nsam.
Efi Yosua so no, atemmufo dii Israel so mfe 356. Yɛte wɔn mu bebree ho nsɛm, a Barak, Gideon, Yefta, Simson ne Samuel ka ho. Yɛkenkan mmea bi te sɛ Rahab, Debora, Yael, Rut, Naomi ne Delila nso ho nsɛm. Ne nyinaa mu no, Ɔfa a Ɛto so ABIƐSA yi ka mfe 396 mu abakɔsɛm.